Iindwendwe Zendlu | December 2021
Amakhaya eSitayile saseSpain- Indlu yelizwe elihombisa
Igqirha Malcolm McDowell's 1920 Ojai indlu yasefama lilizwe lanamhlanje laseMelika elithatha isitayile saseSpain. Iifoto zemithi emhlophe e-rustic emhlophe kunye namagumbi agcwele ukukhanya akhokelela kwi-Old California.
Isitalato esidala eMelika-Amakhaya eMbali eRhafu
Imbali iyayithanda inkampani kwikhaya lasePhiladelphia apho yonke imihla inguLwesine kaJulayi.
Ungayihombisa njani iLoft-12 yeLati yoLwakhiwo lweeNdlu eziLungileyo
Ezi zimvo zilishumi elinambini zokuhombisa kunye neengcebiso ziya kukunceda wenze indawo evulekileyo evulekileyo ngathi likhaya elicocekileyo nelisebenzayo.
Ikhaya laseSanta Fe - Uhlobo lweSouthwestern-Uyilo lwale mihla
Ufumana ntoni xa uthatha uyilo lwangoku kunye nesimbo seNtshona-ntshona? Ikhaya elihle eSanta Fe, enkosi kumyili wezakhiwo uJason Kluck kunye nomyili uEmily Henry. Fumana indlela abazibumba ngayo ezi ndlela zimbini.
Ikhaya lika-Becca Tobin laseHollywood Hills liKhaya eliCociweyo kodwa elinekhaya laseOasis
I-'Glee 'alum kunye nomyeni wakhe uZach Martin banike i-90s yabo isitayile saseSpain ikhaya elungisa ubuso.
Ngaphakathi kweNdlu eneBhola yeBhola yeBhola eKhatywayo engaphakathi ngaphakathi-Uyilo lweDale Blumberg
Thatha ukhenketho kule 25,000-square-feet home eyenzelwe nguDale Blumberg ukuze ubone ubungakanani obugcweleyo benkundla yebhasikithi kunye nomdlalo bhanyabhanya.
INetflix ifihle zonke iintlobo zamaqanda epasika kwii-Chilling Adventures zeSabrina House
Ukuthabatha okutsha kweNetflix kubomi bomlingiswa we-Archie Comics uSabrina Spellman akafani ne-90s sitcom. KwiChilling Adventures KaSabrina, umboniso ukuthath'indlela emnyama, ejijekileyo- kodwa iseti igcwele iimfihlo zokukunceda ufumane indlela yakho, ngokomyili wemveliso uLisa Soper.
Indlu yesitayile seCape Cod-Iingcamango zokuhombisa ezingathath'icala
Umyili uMichael Aiduss ngababini abangathathi cala kunye neempawu ezimnyama.
Imfihlo yeNdlu ye-Eiffel-Indawo efihliweyo yaseParis
Le ndlu ifihlakeleyo ifihliwe ngaphakathi kwi-Eiffel Tower.
Ndiyayithanda indlu kaLucy-Zonke izinto esizithandayo malunga neLucy neKhaya likaRicky
Izele ngumtsalane wama-50s.
Ukuhombisa ngee-aksenti zeorenji- ukuhombisa kweKhaya laseorenji
Umyili uKay Douglass wasebenzisa imibala engathathi hlangothi kwisiseko sendlu ebanzi yeAtlanta, kunokongeza ukugqabhuka kombala kwigumbi ngalinye endlwini.
Indlu yeHive LA yasekhaya ye-600-Square-Foot-Pool House inkulu kwiindlela zokunyusa amaZiko amancinci
Ukuhombisa indawo engama-600-square-foot kunokuba nzima. Ukuhombisa indawo engama-600-square-foot ekufuneka isebenze njengendawo yeendwendwe, isikhululo somsebenzi, kunye nendawo yokuhlala? Kubonakala kungenakwenzeka. Ngethamsanqa, u-Jessica Fleming kunye no-Devon McKeon we-Hive LA Home bebekulo mngeni xa kufikwa kumba wokuyila indlu yeephuli yabathengi babo e-San Marino, California. Ikhaya ngenene kwakufuneka libe nenjongo ezininzi, kuba utata wayefuna iofisi yasekhaya ukuze asebenze, ngelixa igumbi lokulala kunye nekhitshi lenzelwe ukuba ibe yindawo yeendwendwe, utshilo uFleming wolwakhiwo kwindawo yokuhlala. Igumbi lokuhlala kunye nebha yayizezentlalo, njengoko iindwendwe zazinokusebenzisa ezo ndawo njengokwandiswa kwephuli.
UJoe kunye neBeth Edwards Camper Van Tiny Home Tour
Xa uJoe noBeth Edwards bachitha ixesha labo lasemva komtshato behlola iYurophu kwiveni eyayibanjelwe inkampu, babethanda indlela yokuphila kodwa ingeyiyo eyokwemvelo. Bathenga ke encinci abanokuthi benze ngokwezifiso, befaka kuyo yonke into abayifunayo, kanye njengoko befuna. Ngoku banokolula ixesha labo lokutshata ngokungenasiphelo — nangamagama aqinisekileyo! —Kule veni encinci yasekhaya.
Ngo-1920 iNdlu yokuVuselelwa kwamaKoloni eSpanish
UThomas Callaway uhlaziya indlu ye-1920 enemibala engapheliyo.
Le ndlu i-300-Square-Foot kwigumbi yenza indawo encinci ibonakale inkulu-uyila u-Douglas Wan
UDouglas Wan, umnini, ngumakhi-kwaye unezisombululo ezintle zokugcina indawo awabelana ngazo kuthotho lwe-YouTube 'Ukuphila Kakhulu Kwindlu Encinci.'
Ikhaya laseLong Island elinemibala emininzi-Iingcamango zasekhaya ezinemibala
Umyili osekwe eNew York uCatherine Brown Paterson unika iingcebiso kunye nokuqonda malunga nolu shintsho olumibalabala lwalapha ekhaya.
Amakhaya angama-20 afanelekileyo ukuchitha usuku lwekhephu- Amakhaya amaBusika amahle.
Ngqo ngaphandle kwendawo emangazayo yasebusika, ezi ndawo zicocekileyo ziindawo ezifanelekileyo zokuzimela ngemini ebandayo yekhephu.
Amakhaya ali-10 atshintshe iMelika- Uthotho lwe-PBS
Amaxwebhu e-PBS atyelele amakhaya ali-10 kwilizwe liphela anefuthe kwindlela esiphila ngayo namhlanje.
U-Emily Henderson Usinika ukhenketho lweNdlu yakhe eNtsha-uMyili u-Emily Henderson Udliwanondlebe
Umphumeleli we-HGTV Star Star kunye nochwepheshe wekhaya ekujoliswe kulo uEmily Henderson uzenzele igama ngokuhlaziya kwakhe umhlaba ukuya kumagumbi okuzoba unokuhlala kuwo.
Yiyo loo nto ungeke uyeke ukuzinkcinkca-ukubukela iMTV yeNyani
Abaqulunqi bemveliso emva kweMTV 'Ngaba Nguwe?' Chaza indlela yabo yokuyila indlu yexesha lesi-7, kunye nezinto ezimangazayo ekufuneka uzenzile ukwenza inyani yeTV.
I-netflix enika unyaka wasimahla
Isoftware yoyilo lwendlu eyi-3d
ubomi bokwenyani babalisa amabali
tarek kunye christina kufanelekile